नेपालमै २ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ तलब/भत्ता
Visitor is reading नेपालमै २ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ तलब/भत्ता
Visitor from DE is reading Do people change, and best frens do not remain best here in
Visitor from US is reading ~ चौतारी १८१ ~
Visitor is reading First Nepali in Britain got Talent liked by Simon!
Visitor from DE is reading WhataPity ..
Visitor from US is reading H1B Holder GC though marriage - Quit H1b and work in EAD?
Visitor is reading Nepal: Demand for Newa Sovereign State intensifies
[VIEWED 1268 TIMES]
Posted on 06-03-19 1:58 PM Reply [Subscribe]
काठमाडौं । २ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ तलब/भत्ता । त्यो पनि नेपालमै आफ्नै घरपरिवारसँग बसेर ।
तपाईंलाई पत्यार नलाग्न पनि सक्छ । तर, यो सत्य हो । र, गर्न सक्नेले नेपालमै पनि मालामाल कमाउँछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहारण पनि हो यो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्योति पाँडेले गत वर्ष बैंकबाट तलब र भत्ता गरी २ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरणमा सीइओ पाँडेले सो रकम बुझिलिएको उल्लेख छ ।
बैंकहरुको लोन ग्रोथ: रकममा एनआइसी एशिया र प्रतिशतमा एनबी फस्ट, इन्भेष्टमेन्ट र प्राइम लास्ट
सीइओ पाण्डेले १ करोड ४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ तलब, १ करोड ३० लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता, १९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ दशैं भत्ता र १० लाख ४८ हजार रुपैयाँ सञ्चय कोष गरी बैंकबाट कूल २ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ लिएका हुन् । मासिक रुपमा हेर्दा पाँडेले बैंकबाट २२ लाख ९१ हजार ६६ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।
कस्ले तिरेन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४ अर्ब ? खराब कर्जा ३००%ले बढ्यो, कुन बैंकको कति ? (सूचिसहित)
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीइओ पाँडे नै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा महंगो व्यक्ति हुन् । तर, यो वर्ष पाँडे सीइओ भएको बैंकले भने प्रगति गर्न सकेको छैन ।
निक्षेप बढाउनमा जनता र माछापुच्छ्रे फस्ट, इन्भेष्टमेन्ट बैंक लास्ट, प्राइमको घट्यो, अरुको के भयो ? (सूचिसहित)
सञ्चालक समितिमा समेत यति महंगा सीइओको पफर्मेन्समाथि पटक-पटक प्रश्न उठ्न थालेको छ । बैंकको नाफा १० प्रतिशतले घटेको छ भने खराब कर्जा ३०० प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक छैन ।
व्यवस्थापनको कमजोर पफर्मेन्सले इन्भेष्टमन्ट बैंकका लगानीकर्ता निराश (प्राविधिक विश्लेषण)
सीइओलाई धेरै तलबभत्ता दिने दोस्रो बैंक हो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल । गत वर्ष सीइओ रहेका जोसेफ सिल्भानुसले बैंकबाट २ करोड ५१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । मासिकरुपमा यो २० लाख ९६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ हो । उनी अहिले सीइओ छैनन् ।
सीइओलाई तेस्रो धेरै तलबभत्ता दिने बैंक हो नविल बैंक । सर्वाधिक नाफा कमाउने नविल बैंकले गत वर्ष सीइओको तलब र भत्तामा २ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो । मासिकरुपमा यो १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ हो ।
गत वर्ष नविलमा केही महिना शसिन जोशी सीइओ र बाँकी अहिलेका सीइओ अनिल शाहले डेपुटी सीइओ भएर काम गरेका थिए ।
ग्लोबल आइएमइ बैंक पनि सीइओलाई धेरै तलबभत्ता दिने बैंकहरुको सूचिमा चौथो नम्बरमा पर्छ । गत वर्ष सीइओ रहेका जनक शर्मा पौडेलले बैंकबाट तलब र भत्ता गरी १ करोड ९६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बुझेको बैंकले प्रकाशति गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । मासिकरुपमा यो १६ लाख ४१ हजार ८३ रुपैयाँ हो । अहिले उनी सीइओ छैनन् ।
त्यसैगरी, बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पाँचौ धेरै तलबभत्ता खान्छन् । ढुंगानाले गत वर्ष बैंकबाट १ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । मासिकरुपमा हेर्दा यो १५ लाख २९ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ हो ।
बैंकर भुवन दाहाल छैठौं बढी तलबभत्ता खाने सीइओमा पर्छन् । गत वर्ष दाहालले सानिमा बैंकबाट १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । मासिकरुपमा यो १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो ।
सातौं महंगो सीइओमा प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन पर्छन् । शेरचनले गत वर्ष बैंकबाट १ करोड ६७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । मासिकरुपमा यो १३ लाख ९६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ हो ।
सीइओलाई धेरै तलबभत्ता दिने बैंकहरुको सूचिमा सिभिल बैंक आठौं स्थानमा छ । बैंकले सीइओ गोविन्द गुरुङलाई गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दिएको छ । मासिकरुपमा हेर्दा यो १३ लाख ८३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ हो ।
धेरै तलबभत्ता खाने सीइओहरुको सूचिमा सुनिल केसी नवौं स्थानमा छन् । एनएमबि बैंकबाट गत वर्ष केसीले १ करोड ६३ लाख २२ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । मासिकरुपमा हेर्दा यो १३ लाख ६० हजार १ सय ६६ रुपैयाँ हो ।
सीइओलाई धेरै तलबभत्ता दिने बैंकको सूचिमा हिमालयन बैंक १०औं स्थानमा छ । यो बैंकले सीइओ अशोक राणालाई गत वर्ष १ करोड ५५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ दिएको छ । मासिकरुपमा हेर्दा यो १२ लाख ९८ हजार ८३ रुपैयाँ हो ।
नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । सरकारी स्वामित्वका ३ वटा बैंकलाई छाड्ने हो भने अधिकांश बैंकका सीइओले वर्षमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तलबभत्ताबापत बैंकबाट लिन्छन् ।
करौडौं तलब लिने सीइओहरुले लगानीकर्तालाई कस्तो प्रतिफल दिए त ? त्यो अर्को स्टोरीमा ।